माधव समूहबाट शिक्षामन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्रीको नाम गयो ! – jagritikhabar.com
माधव समूहबाट शिक्षामन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्रीको नाम गयो !
गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले माधव नेपालकुमार समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । नेपाल समूहकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिनाभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हिजो लिएका छन् । एमालेको नेपाल समूहको समर्थनबिना देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना रहेको स्थितिमा माधव पक्षले विश्वासको मत हालेको हो।
देउवा तत्कालै विश्वासको मत लिने तयारीका साथ आगाडी बढेपछि नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेता नेपालको निवासमा नै पुगेर सरकारमा सहभागीको लागि आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।